Amaphoyisa anikezwa amathuluzi okuzivikela - Cele | News24
Amaphoyisa anikezwa amathuluzi okuzivikela - Cele
Johannesburg - UNgqongqoshe wamaPhoyisa uBheki Cele uthi maduzane kuzoqiniswa ezokuphepha esiteshini samaphoyisa eNgcobo esifundazweni i-Eastern Cape, ukuqinisekisa ukuthi amaphoyisa awahlaselwa kalula yizigebengu.
Ekhuluma ngoLwesibili enkonzweni yesikhumbuzo samaphoyisa amahlanu abulawa kanye noyedwa owayeyishosha, uCele uthe ukubulawa kwamaphoyisa ngesihluku ngeke kwabekezelelwa, wathi bazokwenza isiqinisekiso sokuthi isiteshi samaphoyisa sisesimeni esifanele.
UCele uthe: “Ukhomishana kazwelonke kanye nami sizofika lapha sizobheka izinto ezifana nesimo sesiteshi samaphoyisa, i-IT esiteshini sawo, kanye namakhamera, nakho konke okunye ukuze amaphoyisa aphephe.”
OLUNYE UDABA: Uma singcwaba amaphoyisa, izingane zawo zizodsala nobani - Cele
Unxuse amaphoyisa ukuba asebenzise izibhamu uma kuphela kunesidingo sokuzivikela wona kanye namalungu omphakathi ezigebengwini, wathi akumele abulawe ephethe izibhamu amaphoyisa.
“Amaphoyisa siwanikeza amathuluzi okuzivikela, asiwakhuthazi kodwa ukuba abe ngondlavini. Amaphoyisa asiwaqeqesheli ukuba azobulawa kodwa ukuba asize umphakathi,” kusho uCele.
Khonamanjalo, imibiko yangoLwesithathu ekuseni ithi sekuphinde kwaboshwa omunye umsolwa ngecala lokubulala eNgcobo.